टेकु अस्पतालबाट भागेका व्यक्ति विराटनगरमा भेटिए
काठमाडौं। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको आइसोलेसन वार्डबाट भागेका बिरामी सम्पर्कमा आएको अस्पतालले जनाएको छ। कोरियाबाट फर्केका ती युवा कोरोना भाइरस (कोभिड -१९) को संक्रमणको आशंकामा बुधबार शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको आइसोलेसन वार्डमा भर्ना भएका थिए।
अस्पतालबाट भागेर उनी विराटनगर पुगेको र उनलाई बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा जान आग्रह गरिएको टेकु अस्पतालका निर्देशक डा.सागर राजभण्डारीले जानकारी दिए। प्रतिष्ठानमा पनि आइसोलेसन वार्ड रहेका कारण उनलाई त्यही राख्ने तयारी गरिएको उनले जानकारी दिए।
अस्पतालले ती युवालाई कोरोना भाइरसको संक्रमण नभएको र सामान्य घाँटीमा समस्या भएको अस्पतालका प्रवक्ता डा. अनुप बास्कोटाले जानकारी दिए। संक्रमणको आशंकामा अस्पतालमा अहिले कोरिया, यूएई र कतारबाट आएका ३ जना नेपाली, भारतबाट आएका एक जना फ्रेन्च नागरिक भर्ना भएका छन्। उनीहरुको बिहीबार कोरोनाको परीक्षण बिहीबार गराइने भएको छ।
अस्पतालमा ४ जना शंकास्पद बिरामी भर्ना अस्पतालका प्रवक्ता डा. अनुप बाँस्तोलाले जानकारी दिए।